5 Siyaabood Oo Gabar Jaceyl Loogu Abuuro - Aayaha
Home/XIRIIRKA IYO GUURKA/5 Siyaabood Oo Gabar Jaceyl Loogu Abuuro
5 Siyaabood Oo Gabar Jaceyl Loogu Abuuro
Si aad haweeney isku jecleysiiso ama jacayl aad ugu abuurto, waa inaad daganaataa oo aad taxadartaa maadaama dumarka qaarkood ay ku adag tahay inay qalbiyadooda u dhiibaan ragga qalbi jab badan oo ku dhacay aawgood.
Waa kuwaan dhowr tallaabo oo haddii aad qaado kaa caawinaya inaad jacayl ku abuurto gabar kasta.
Dumarka intooda badan ma rabaan in lala xiriiriyo nin aanan akhyaar ahayn. Tani waa mid ka mid ah sifooyinka ugu horreeya ee ay ka raadiyaan ragga.
Waxay rabaan inay arkaan shaqsiyadaada iyo sida aad akhyaar u tahay intaanay kuu soo dhowaan. Ragga, ku dadaal inaad noqoto nin wanaagsan oo akhyaar ah, sababtoo ah tani waxay kuu horseedi kartaa inaad u dhowaato ama aad soo dhaweysato haweeney aad jeceshahay.
2. Noqo Romantic
Haweenka waa kuwo lagu yaqaan inay ka helaan ragga u muujia jaceylka. Sidaas darteed, waa inaad noqotaa nin kalgaceyl leh oo jaceylka wax ka yaqaana adigoo sameynaya qaar kamid ah caadooyinka jacaylka.
Tusaale ahaan, si joogto ah ugu dir ubaxyada jaceylka, wac si aad u aragto sida ay xaaladeedu tahay.
3. Maad iyo qosol
Ka dhoola cadeynsiinta gabar waxay abuurtaa waayo-aragnimo xusuus mudan. Sidoo kale, ha ilaawin in dumarka badankood ay ku raaxeystaan inay la socdaan nin qosol leh ama nin kaftan badan oo ka dhoolacadeysiiya.
Noqoshada isha dhiirigelinta gabadha aad jeceshahay ayaa ah inaad ku dhiirrigeliso iyada inay raacdo riyadeeda iyo hamigeeda. Markaad sidaas sameyso, waxay baran doontaa inay qiimeyso kana mahad celiso iyadoona ay u badantahay inay bilaawdo inay dareen kuu qaado.
5. Garab istaag
Gabdhaha badankood waa nugul yihiin waxayna u baahan yihiin saaxiib dhinacooda istaaga.
Saaxiibtinimadu aad ayey muhiim ugu tahay haweenka taasina waa sababta ay dhammaan xiriirada mustaqbalka wanaagsan leh ay uga bilaawdaan saaxiibtinimada.
4 Reasons why you should spice your food with garlic
Wax ka ogoow cunooyinka marka la isku daro sunta noqon kara
Sheeko Layaab Leh: Nin Xaaskiisa furay kadibna ku shaaciyay gaarigiisa inuu furay, si loo ogaado
3 Calaamadood Oo Aad Ku Ogaan Kartid In Ninka Uusan Ku Rabin
Deeqa Afro oo ka hadashay sababta ay u codsatay in geed la saaro marka ay dhimato
Toban Cunto Iyo Faa’idooyinka Ay Jirka U Leeyihiin